Yoane Wissa Oo Gurigiisa Lagu Weeraray Aasiidhna Wajiga Lagaga Daadiyey – Heemaal News Network
Waddanka Faransiiska ayaa looga murugoonayaa mid ka mid ah ciyaartoyda kooxaha heerka koowaad oo caan ka ah gudaha dalkaas, kaas oo wajiga lagaga shubay wax loo malaynayo inay yihiin AASHATO/AYSIIDH, isla markaana loola cararay cusbitaalka oo qalliin degdeg ah ku samaynaya.
Xiddiga kooxda Lorient ee Yoane Wissa ayaa qalliin degdeg ah lagaga sameeyey wajiga oo lagaga shubay wax kulul oo ay warbaahinta qaarkeed ku sheegeen AASHATO/AYSIIDH xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo ay ugu soo gashay gabadh cadhaysan.
Sida uu qoray wargeyska L’Equipe, 24 jirkan ayaa ka gubtay wajiga oo ay ku jiraan indhuhu kaddib markii ay haweenay aan magaceeda la sheegin ay ku shubtay wax kulul.
Qalliinka degdega ah ee lagu sameeyey kaddib, xaaladda Yoane Wissa ayaa la sheegay inay wanaagsan tahay oo aanay jirin khatar weyn oo soo afjari karta cimrigiisa ciyaareed, isla markaana uu sii wadan karo kubadda cagta.
Warbaahinta Faransiiska ayaa waxay sheegeen, in Yoane Wissa oo gurigiisa jooga gellinkii dambe ee Khamiista ay u timid gabadh weydiisay su’aalo la xidhiidha waxyaabo uu u saxeexay wiil ay iyadu dhashay.
Wissa ayaa si fiican ula dhaqmay gabadha sida uu warku sheegay, hase yeeshee isla haweenaydan ayaa kusoo noqotay saqdii dhexe ee habeennimadii Jimcuhu soo gelayay, waxaanay gudaha usoo gashay guriga iyadoon cidna ogolaansho weydiisan.
Yoane Wissa iyo gabadha ayaa isku dhacay waqtigaas, waxaana muran kaddib uu Wissa ku war helay wax kulul oo dareere ah oo wajiga lagaga shubay.
Kooxda kubadda cagta Lorient ayaa dhalleecaysay falkan, waxaana war-saxaafadeed ay soo saartay ay kaga warbixisay xaaladda Yoane Wissa.
War-saxaafadeedka kooxda ayaa lagu yidhi: “Kooxda kubadda cagta Lorient waxay ogaatay subaxnimada saaka (Khamiistii) in uu Yoane Wissa dhibbane u noqday weerar gurigiisa loogu soo qaaday habeennimadii kaddibna si degdeg ah loogula cararay cusbitaalka. Yoane waxa uu gelayaa qalliin maanta.
“Kooxdu way argagaxsan tahay, waxaanay taageero u muujinaysaa Yoane iyo qoyskiisa, waxaanay ciyaartoyga u rajaynaysaa soo kabashasho degdeg ah.”
Kooxda ayaa waxa kale oo ay laamaha caddaaladda ka dalbatay in sharciga la horkeeno oo caddaaladda la marsiiyo qofkii geystay ficilkan.
R/Wasaare Rooble Oo ka Hadlay Qaraxii Ismiidaaminta ahaa Ee Muqdisho.
Lorient Forward Yoane Wissa Attacked At Home, Taken To Hospital